२०७५ भदौ ३ आइतबार | परिसंवाद
parisambad	 आइतबार, भदौ ३, २०७५ मा प्रकाशित
कानुनी प्रष्टताको अभाव, कर्मचारीको अभाव र नीतिगत असहजताले स्थानीय तह सञ्चालनमा कठिनाइ आएको डिमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरको अध्ययनले देखाएको छ । सेन्टरले आठ महिना लगाएर ५४ जिल्लाका ६७ नगरपालिका र ७८ गाउँपालिका दुई हजार नागरिकमासँग कुराकानी गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
प्रदूषण मापदण्ड नै नरहेको रनर मोटरसाइकल नेपालमा आएको समाचार कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रदेश नं. ५ कतिपय जनप्रतिनिधि डोजरको समेत मालिक भएको र त्यसबाट मुनाफा कमाइरहेको समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशको विकास आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
पहिरोको जोखिम बढेपछि दैलेखको नारायण नगरपालिका—१ का ११ घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको समाचार छ ।
यात्रुसँग दोब्बर भाडा असुलेको अभियोगमा १२ वटा सुमोलाई बाराको पथलैयाबाट प्रदेश ट्राफ्रिक प्रहरी कार्यालयले भदौ २ गते नियन्त्रणमा लिएको समाचार छ ।
एशियाली महादेशको सबैभन्दा ठूलो खेल महोत्सव (एशियाड) भदौ २ गतेदेखि इण्डोनेशियाको राजधानी जाकार्तामा शुरु भएको छ । एशियाडमा नेपाली टोलीको पनि सहभागिता छ ।
बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्ने माग गर्दै महिलाको एक समूहले माइतीघर मण्डलामा अर्धनग्ग प्रदर्शन गरेका छन् ।
तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका—४ पिप्लेस्थित एक घरमा आगलागी हुँदा तीन लाखभन्दा बढीको धनमाल क्षति भएको खबर छ ।
संयुक्त राष्ट्रंघका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानको ८० वर्षको उमेरमा निधन भएको बीबीसीले जनाएको छ । अन्नान महासचिव बन्ने पहिलो अश्वेत अफ्रिकी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो ।